Warmly Welcome: February 2009
နွေရဲ့သရုပ်က ပိုပြီး ပီပြင်လာတယ်။ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေကိုက ပူနွေးနွေးရယ်ပါ။ ကြည့်လိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေက ရင်ကို အေးမြမှုစေဖို့ မဆောင်ကျဉ်းနိုင်ပါဘူး။ ပူလောင်နေတဲ့ နွေကို ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေ အတွက်တော့ စက်ရုပ်လိုပဲ လှုပ်ရှားမှုက သွတ်သွတ်လက်လက် နဲ့ပါ။ အနှီကဲ့သို့ ပူပြင်းတဲ့ မြို့ရန်ကုန်ထဲ သွားရင်း လာရင်းနဲ့ အိုအေစစ်လေး တစ်ခုကို တွေ့လိုက်မိတယ်။ ဒီ အိုအေစစ်လေးကို မြင်တွေ့ ခံစား လိုက်ရသူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲကို အေးမြ လန်းဆန်းသွားစေမှာ အမှန်ပါ။ အဲဒီ အိုအေစစ်လေးရဲ့ နာမ်စားလေးကတော့ အချစ် ဆိုတာ ပါပဲ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးက တိုတိုလေးပါ။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာ၊ ၀ိညာဉ်၊ စိတ်အစဉ်ကို ဖမ်းယူ ညို့ထားနိုင်စွမ်းတာ အချစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ကို လက်နဲ့ မတို့ မထိနိုင်ပေမယ့် အရာရာတိုင်းမှာ စိမ့်ဝင်နေတတ်တဲ့ အချစ်ရဲ့ ချိုမြိန်မှုတွေကိုတော့ လူတိုင်း ခံစားနိုင်မှာပါ။ ချစ်ခြင်းကို ခံစားမိတဲ့ ခဏတာ အချိန်လေးမှာ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ အသွင် ပြောင်းလဲ သွားနိုင်တယ်။ ဆောင်းရာသီဆိုတာ မရှိဘူး၊ ညဆိုတာ မရှိဘူး၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှု၊ အလိုမကျမှုနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို အကုန် ၀ါးမြို ပစ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင် ရှိတယ်။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွန်တော့်အတွက် ထွေထွေထူးထူး ဖော်ကျူးစရာ မရှိပေမယ့် ကျွန်တော် နားလည်မိတဲ့ အချစ်ဆိုတာကတော့ .. ..
အချစ်က အချိန်ကို စားသုံးတယ်
အချစ်က ခါးသီးမှုတွေကို ချိုမြစေတယ်
အချစ်က နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို သက်သာစေတယ်
အချစ်က အရာရာတိုင်းကို လှပအောင် ဖန်ဆင်းပေးတယ်
အချစ်က ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုထဲကနေ ပျော်ရွှင်စရာကို သယ်ဆောင်လာနိုင်တယ်
အချစ်က ခက်ထန်မာကြောတဲ့ နှလုံးသားအားလုံးကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေတယ်
အချစ်ကို နည်းနည်းယုံကြည်သူတွေအတွက် အချစ်နည်းနည်းပဲ ပြန်ရမယ်
အလုံးစုံကိုသိခြင်း၊ အဆုံးစွန်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း တွေကို ဖြစ်စေတဲ့ နှလုံးသားရဲ့ ဘယ်သောအခါမှ မသေဆုံးနိုင်တဲ့ ဆာလောင် မွတ်သိပ်မှုကို ပေးနိုင်စွမ်းတာ အချစ်ရယ်ပါ။ အချစ်ကြောင့် နောင်တရတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ်သောအခါမှ ပြောထွက်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် စာတစ်တန် ပေတစ်ရွက် ရေးဖွဲ့နိုင်လောက်အောင် အတွေ့အကြုံ မမျှနိုင်သေးတာကြောင့် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အချစ်ဆိုတာ လက်ဆောင်တွေအားလုံးထဲမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။ အချစ်အကြောင်း ကို နားလည်သလို ပြောပေးပါဆိုပြီး TAG ထားတဲ့ ညီလေး ကိုရဲ တစ်ယောက် ကျေနပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီ tag ပို့စ် အချစ်အကြောင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲ မကြီး မကဗျာ နဲ့ ညီမငယ် ပန်းခင်းလေး နှစ်ယောက်ကိုပဲ ထပ် tag ချင်ပါတယ်။ အချိန်ရရင် ရေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျေနပ်နိုင်ပါစေ။
Tag လေးကို ပြန်ဖြေထားတာ ဖတ်ကြည့်ပါအုန်း
မကြီး မကဗျာ က အချစ် ...... တဲ့
ညီမငယ် ပန်းခင်လေး က အချစ်ဆိုပါလား.
ပုံကို photobucket ကနေ ယူသုံးထားတယ်နော် .. ..
Labels: Tag, အချစ်
Win: မင်္ဂလာပါ၊ ဘယ်သူများပါလဲ၊ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်
Win: ပြောပါ၊ say something pls
thinstar1: ခင်ချင်လွန်းလို့ပါရှင့်၊ အဟိ
Win: ခင်တတ်ပါတယ်၊ ဘယ်သူများလဲ မသိဘူးနော်
Win: မ-သိဘူး နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်
Win: နာမည်တူတွေ များတယ်နော်
Win: ခင်ချင်တာပဲ နာမည်လေးတော့ ပြောသင့်တာပေါ့
Win: ဒါမှလည်း စကားပြောရတာ အဆင်ပြေတာပေါ့၊ ဒါဆို ဘလောဂ့်ရှိလား
thinstar1: ဘလော့လ်ဆိုတာဘာလဲ၊ မသိ
Win: ဒါဆို ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုသိပြီး ဘာလို့ ခင်ချင်တာလဲတော့ မသိဘူး
thinstar1: ဘာကောင်လဲလို့၊ တကယ်ပြောတာ
Win: ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ သာမန်လူထဲက လူပါပဲ
Win: ခုပဲ ဗေဒင်တွက်လာတာ၊ လူမုန်းများတယ်တဲ့၊ မှန်တာတော့ မှန်နေပြီ
thinstar1: အရမ်းမှန်တယ်၊ ဗေဒင်ဆရာကိုအိမ်မှာပူဇော်ထား သိလား
Win: အမြင်ကပ်တာ ဘာကြောင့်လဲ၊ အကြောင်းတော့ ရှိမှာပါ
thinstar1: အခြေကြီးတယ်လို့ ပြောာသံကြားလို့
Win: နံပတ် ၁၁ ပဲစီးတာပါ
thinstar1: ဟင်၊ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ
Win: ဘယ်သူက မြောက်ပေးလိုက်တာလဲ မသိဘူးနော်
ကနေ့အထိတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အမှား မလုပ်ခဲ့သေးပါဘူး
နစ်နာ ထိခိုက်တာများ ရှိရင်
thinstar1: ဟင်၊ နင်ကို ငါ ခုမှသိတာ၊ ဘာထိခိုက်မှု့မှ မရှိဘူး
Win: ဒါဆို ဘာလို့ အမြင်ကတ်တာလဲ
thinstar1: စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်နေလို့၊ အင်ဗိုက်လုပ်လိုက်တာ
Win: ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ
thinstar1: မာန ကြီးတယ်လို့ ပြောသံကြားလို့ပါဆိုဟာ
Win: ကျွန်တော်က အားလုံးကို ခင်တတ်ပါတယ်
thinstar1: ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ဟုတ်၊ ယုံပါတယ်ရှင့်
Win: မာနဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်၊ ခုလိုမျိုးပေါ့၊ ခင်ချင်တယ်ပြောပြီး
Win: ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ် ဆက်ခင်မလဲ၊ စဉ်းစားကြည့်ပါအုန်း
thinstar1: ထင်ချင်သလို ထင်နိုင်တယ်
Win: ကျွန်တော်က မျက်နှာမရှိတဲ့သူနဲ့ စကားပြောနေရမှာလား
Win: သယ်ချင်းတို့ဘက်က မာန လျော့သင့်တယ်မဟုတ်လား
ခင်မင်ချင်စိတ် တကယ်ရှိခဲ့ရင် ပြောပါတယ်
thinstar1: မပြောရင် ခင်လို့မရဘူးဆို၊ သဘောအတိုင်းပဲ
Win: အဲဒီ သဘော မဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော့် သယ်ချင်းတွေ အများဆုံးက blogger တွေ ဖြစ်တယ်
ဒီလို ဘုမသိ ဘမသိ နဲ့တော့ စကားပြောရတာ တစ်မျိုးကြီးပါပဲ
တောင်းပန်တော့လည်း အထက်စီးက မဆင်းချင်ဘူး
ဒါကို ကျွန်တော်ကပဲ မာနကြီးတယ်ဖြစ်ရတယ်။
thinstar1@gmail.com လိပ်စာနဲ့ မနေ့က ကျွန်တော့်ကို အရင်လာပြီး Invite လုပ်ထားခဲ့တယ်။ ဒီမနက် အဲဒီကလေးမ ကပဲ အရင်ဝင်ပြီး အပေါ်ကအတိုင်းပဲ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ စကားစပြောကတည်း လူတဖက်သားကို အကောင်းမမြင် ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောပြီး စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်အကြောင်းကို လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် နေချင်သူတွေ အနေနဲ့ သူများတွေကိုလည်း မိတ်ဆွေဖွဲ့နေစရာများ လိုသေးလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ နာမည်လေး တစ်လုံးလောက်တောင် မပြောပြ နိုင်လောက်အောင် လျှို့ဝှက်ထား ချင်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရိုးသားမှု မရှိဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ဒီလို ဒီအကြောင်းတွေ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ Invite လုပ်လာရင် အမြဲပဲ No ပေးခဲ့မိပါတယ်။ လူတိုင်းကို သူငယ်ချင်းလို၊ မိတ်ဆွေရောင်းရင်းလို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ခင်မင် တတ်ပါတယ်။ ခင်လည်း ခင်ချင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဖြေရှင်းပေး တတ်ပါတယ်။ (အိပ်စိုက်ပြီးတော့ပါ) ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ခင်မင်ဖို့တော့ လိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ စောစောစီးစီး နှလုံးနာစရာဖြစ်လို့ ဒီလို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နစ်နာသူများရှိရင် ဒီကပဲ တောင်းပန်ပါရစေ။
Posted by Welcome at 11:07 AM
Labels: About the Woman, ကိုယ်ကျင့်တရား, တစ်နေ့တာအချိန်များ, အတွေး, အထွေထွေ
မနေ့ကနဲ့ မတူတဲ့ ဒီဘက်နေ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုများက အရင်ကထက် သွတ်လက်ပေါ့ပါး လွန်းတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်မိပါတယ်။ ဘာပဲ လုပ်လုပ် စိတ်လက် ပေါ့ပါးနေပြီး ဖျက်ဖျက်လတ်လတ် ရှိလှတယ်။ အတွေးအခေါ် တွေကလည်း ကြည်လင် တောက်ပနေတယ်လို့ ခံစားရမိတယ်။ စိတ်ရွှင်တယ်ဆိုတော့ ဘာလုပ်လုပ် သီချင်းတအေးအေးနဲ့မို့ ဒေါ်လေးတွေက မေးငေ့ါပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်တို့ကြတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ လုပ်စရာတွေ အစီအရီနဲ့ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်ဂရုမပြု မိပါဘူး။ မနက် ၅ နာရီခွဲကတည်းက အိပ်ယာထတယ်။ ကားတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဘော်ဒီကိုအောက် ပို့ထားလိုက်တယ်။ ဘယ်သူ ဘယ်သွားသွား အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပါ။ (စေတနာလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ အပြင်ထွက်စရာရှိလို့ ခေါ်ရင် မရှိလုိ့ကတော့ ကွိုင်တက်နိုင်တယ်လေ၊ ခေါင်းက ဒီလို ကြည်လင်နေတာ) ဂျင်းပန်ကိုစွပ် စီအင်န်စီကိုဝတ်ပြီး အစိမ်းရောင်တွေ ဖြည့်ထားတဲ့ သာရေပိုက်ပိုက်အိတ်ကို ခါးကြားထိုးပြီး လမ်းထိပ်ထွက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လဲ ... လို့ လှမ်းမေးတော့ လဘက်ရည်သွားသောက်မလို့ ဆိုပြီး ခပ်သွက်သွက်လေး ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဖုန်းမပြောဖြစ်တာ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ဖုန်းမဆက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဖုန်းမပြောဖြစ်တာ ဟန်းဆက် မရှိလို့ ဖုန်းမရှိလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းဆက်ပြောစရာ ဘော်ဘော်လည်း မရှိ၊ ဖော်ဖော်လည်း မရှိတာကြောင့်ပါ။ သိပ်သနားစရာကောင်းတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀လေးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှစ်သိမ့်မိပါသေးတယ်။ အိမ်မှာ နံပါတ် ၉ လုံးနှိပ်ရင် သတိပေးခံရမယ်။ နယ်ဝေးဆိုရင် မေးမနေနဲ့ ဆက်စရာမလိုဘူး။ ဒီလို ချွေတာတဲ့ အကြောင်းလေးတွေရှိတယ်။ ဒေါ်လေးတွေက ပျိုပျိုကြီးတွေဖြစ်ပြီး သာလိက၊ စာကလေး၊ ကတ္တ၀ါ တွေ ၀င်စားထားတာ ဆိုတော့ နားပူတာ မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်းပြောစရာရှိရင် လမ်းထိပ်ကိုပဲ ထွက်ရတယ်။ ဆသရ ကမမကြီးတွေ မရောက်သေးရင် ယောင်လည်လည်နဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေ စောင့်နေရတယ်။ ရောက်လာရင် ကိုယ်ကဦးအောင် နေရာယူရတယ် နယ်ဝေးဆက်မှာဆိုတော့ အချိန်ပေးရတတ်တယ်လေ။ ညနေခင်းဘက်ဆိုရင် ဒီဘက်က လူရှင်းပေမယ့် ဟိုဘက်အဆောင်မှာ လိုင်းတွေ ပြွတ်သိပ်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတတ်တာ ခဏခဏပါ။ ဒီလိုနဲ့ ရှိန်းမြမြ ကလေးအသံ လွင်လွင်လေးကို နားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ မနက်တစ်ချိန် ညနေတစ်ချိန် မဖြစ်မနေ ဖုန်းဆက်ဖို့ ကျေနပ်စွာနဲ့ ဒီဂျူတီကို တိုးယူလိုက်တယ်။
အနေမနီးပေမယ့် အလှမ်းဝေးတယ် မထင်မိပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဆက်နွယ်နေတဲ့ မသိစိတ်လေးကြောင့် အနေနီးနေခဲ့တယ်။ မမြင်မတွေ့ နိုင်ပေမယ့် မျက်ဝန်းထဲက မထွက်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဘေးချင်းယှဉ်ရှိစေမယ့် ကြယ်စုံညရဲ့ အိပ်မက်လေးတွေ အမြဲရှိနေခဲ့တယ်။ ဆုတောင်း မပြည့်သေးပေမယ့် စိတ်ဆောင်လိုက် လေတိုင်း လေပြေနဲ့အတူ အပြေးအသော့နှင်လာမယ့် မင်းရဲ့ ရယ်သံလေးကို ရင်နဲ့အပြည့် ဖမ်းဆုပ်ထားမြဲဖြစ်တယ် ဆိုတာ ယုံကြည်စေချင်တယ်။ ချိုမြိန်တဲ့ အရသာရှိပေမယ့် အောင့်သော နာကျင်မှုကိုပေးတဲ့ ကြင်နာမှုတွေကို အပြုံးမပျက် ပူဆာယူလျက်ပါ။ အချစ်ကို တင်ကြို အိပ်မက်မက် တတ်သူဟာ အချစ်ချောက်ထဲကိုကျဖို့ ပိုပိုနီးစပ်စေဆိုတာ သိနေပေမယ့် နှစ်ဦးသားဆုံနေကျ အိပ်မက်ထဲကိုပဲ တိုးလို့ မြင်မက်နေဆဲပါ။ ညတိုင်းမြင်မက် အိပ်မက်တိုင်းမှာ မင်းသာ အမြဲနေရာယူဆဲပါ .... .... ။
ပုံကို photobucket ကနေ ယူသုံးထားတယ်နော်။
Labels: အချစ်, အတွေး
ကျယ်ပြောလှတဲ့ လောကကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ သိထားတာထက် မသိနိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာတွေ အများအပြားကို အချိန်တိုအတွင်း ပြောပြပေးနိုင်မယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးကို မျှဝေပေးခြင် ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ သိလိုသမျှ မေးခွန်းမှန်သမျှကို ငွေကြေးမယူဘဲ သင့်ရဲ့ Mail box ထဲကို မိနစ်မဆိုင်းဘဲ အဖြေလွှာကို ပေးပို့ပေးမှာပါ။ အမေးကဏ္ဍမှာ Recreation & Outdoors, Computers & Internet နဲ့ Shopping & Product Advice ကဏ္ဍတွေ ခွဲခြားထားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတိုင်းအတွက် အဖြေတိုင်းဟာ အမှန်တရားစစ်စစ် ဖြစ်တယ်လို့တော့ တထစ်ချ ယုံမှတ်ယူလို့တော့ မရပါဘူး။ ချင့်ချိန်ပြီး ယုံကြည် စေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အမေးအတွက် ဖြေကြားပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မည်သို့သော မူကိုလက်ကိုင်ထားသည်ကို မသိနိုင်လို့ပါ။ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ အမေးကမ္ဘာ ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးကတော့ www.answerly.com ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 1:18 PM
အပျင်းပြေစေဖို့ အနေနဲ့ ဥာဏ်စမ်း ၀က်ဘ်ဆိုက်လေး တစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျီစယ်မယ် နောက်ပြောင်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လေးက အကူအညီပေး ပါလိမ့်မယ်။ အပျင်းလည်းပြေ၊ ဥာဏ်လည်း ရွှင်စေပါမယ်။ စမ်းကြည့်ပါအုန်း။ ဒီကနေ သွားရအောင်ပါ www.quizyourfriends.com ။
Posted by Welcome at 6:06 PM
Labels: ကဗျာ, ငံပြာရည်ကျိုခြင်း, အချစ်, အမှတ်တရနေ့
ဘယ်သူ့ကိုများ အပြစ်တင်စရာ လိုမှာလဲ
ဖန်တီးယူလို့ မရတဲ့ ပုံဆောင်ခဲ ပဲလေ .. ..
Labels: ကဗျာ, ဆန္ဒ
တောင်ကုန်း တောင်တန်းတွေ လေးဖက်လေးတန် ၀န်းရံထားပြီး မြို့လေးကို ဒယ်အိုးသဏ္ဍာန်နဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းလွင်ပြင်ထဲမှာ တည်ထားတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ အရိုးကွဲအောင် ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်းပြီး နွေရာသီဆို အညာက မြို့တွေလို ပူပြင်းလွန်း ပါတယ်။ မိုးတွင်းဆို မိုးများပြီး ကောင်းကင်ယံမှာ မြူတွေ တိမ်လိပ်တွေ အမြဲပဲ အစိုင်လိုက် ခဲနေတတ်တဲ့ ရာသီဥတုလေး ရှိတယ်။ သံလွင်မြစ် အရှေ့ခြမ်း ကိုးမြို့နယ်မှာ အကြီးဆုံးမြို့လည်း ဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသား မျိုးစုံ အခြေချ နေထိုင်ပြီး ပျော်စရာ အတိပြီးတဲ့ မွေးရပ်မြေ ကျိုင်းတုံမြို့လေးပါ။
ကိုယ့်မွေးရပ်ကို ခွဲခွာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့တာမို့ မျက်စိထဲ စွဲစွဲထင်ထင် မြင်မိတာတော့ မြို့လည်ခေါင်က မဟာမြတ်မုနိဘုရား၊ နောင်တုံကန်၊ ဟိုခုံဈေးနဲ့ မြို့မဈေး။ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ မြို့မ ဘောလုံးကွင်း၊ ဘက်စကက်ဘော ကွင်းတွေပါ။ ခုလို ဆောင်းတွင်းဆို သွားနေကျ ရေပူစမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်ရဲ့ ရနံ့စစ်စစ်ကို ခံစားချင်ရင်တော့ ချယ်ရီပင်တွေ အစီအရီနဲ့ တစ်လမ်းလုံး ချယ်ရီပွင့်တွေကြွေချထားလို့ လှပလွန်းနေတဲ့ ပန်ဝိုင်လိုရွာလေးကို မျက်စိထဲက မထွက်ပါဘူး။ ဒီအထဲကမှာမှ ပိုအမှတ်ရမိတာတော့ သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ အထိ ၁၁ နှစ်လုံးလုံး တက်ခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်း လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းလေးက လွိုင်စွန်ဆိုက်တောင် ပေါ်မှာရှိပြီး ခရစ်ယာန် မယ်သီလရှင်ကျောင်းကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းထားတဲ့ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းပေါ်ကကြည့်ရင် နောင်တုံကန်ကို အတိုင်းသား မြင်နိုင်သလို၊ လွိုင်စွန်တောင်းတောင် ပေါ်က စွန်တောင်းစေတီကြီး ကိုလည်း ထည်ထည်ဝါ၀ါ လှမ်းဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်။ ညာဖက်ကို လှမ်းကြည့်ရင်တော့ လွိုင်စွန်မွန်းပေါ်က ထုထည်ကြီးမားလှတဲ့ သစ်တစ်ပင်တောင်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(ရ)တန်းနှစ်ရောက်တော့ အခန်းရှေ့မှာ စုဘူးအကြီးကြီး တစ်လုံး တည်ထားတယ်။ တစ်တန်းလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဲဒီ စုဘူးကြီးထဲကို ကိုယ့်မုန့်ဖိုးထဲကနေ တတ်နိုင်သလောက် ထည့်ကြတယ်။ ဇွန်လကနေ ဇန်န၀ါရီလအထိ စုလာတဲ့ ဒီစုဘူးကြီးကို အတန်းပိုင်ဆရာမရယ် အတန်းခေါင်းဆောင်ရယ် ၀ါ၊ စိမ်း၊ နီ၊ ပြာအရောင် ၄ ရောင် ခေါင်းဆောင်ရယ်နဲ့ အတန်းသားအားလုံးက စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ ဖောက်ပြီး ပိုက်ဆံရေတွက်ကြတာ ပျော်စရာပါ။ နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ လုပ်ကြဖို့ ငွေတွေ နည်းနည်းချင်း စုလာကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းဖော်တွေနဲ့ တစ်ကျောင်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ အားလုံးကို ဖိတ်ကျွေးတာ ဖြစ်လို့ ၆ လကျော်စုလာတဲ့ငွေနဲ့ တွက်ပြီး ကျွေးမွေးချင်တာကို တိုင်ပင်ကြတယ်။ ငွေလိုရင်လည်း တစ်တန်းလုံး အချိုးကျ ထပ်ထည့်လိုက်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ညမှာ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ သူ့အတန်း သူ့အခန်း အလိုက် ချက်ကြ ပြုတ်ကြ၊ အခန်းကို ဒိုက်ကရေးရှင်း ပြင်ဆင်ကြနဲ့ သူ့တာဝန်နဲ့ သူမို့ အားကြတယ် မရှိပါဘူး။ ကက်ဆက်တွေ အမ်ပလီဖိုင်ယာတွေ စပီကာတွေ ညံစီနေသလို ပူစီဖောင်းတွေ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သုံးတဲ့ ရောင်စုံကြိုးတွေ အစုံအလင်နဲ့ အလှဆင် ကြတယ်။ မပင်ပန်းကြ သလို မောတယ်လို့လည်း မပြောကြပါဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက်နေ့မှာ ပြင်ဆင်တာတွေ အချောသတ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးကစလို့ မူလတန်းကနေ အထက်တန်းအထိ ဆရာအားလုံးကို အလှည့်ကျ ဖိတ်ပြီး ကျွေးမွေးတယ်။ ဆရာ ဆရာမတွေကို ကန်တော့တယ်။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် မျက်ရည်လည်အောင် ကြည်နူးမိပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေ ပြီးတာနဲ့ အတန်းဖော်တွေ စုကစားကြတယ်။ နောက် ညီညီညာညာ သိမ်းဆည်းရင်းနဲ့ပဲ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ပျော်ရွှင်ပွဲလေးကို အစသတ်ခဲ့ကြတယ်။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက် ကျင်းပလာတဲ့ အမှတ်တရ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေးရယ်ပါ။
ရှမ်းပြည်ရဲ့ ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို အဓိပ္ပာယ် ပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့ အနှစ်သာရ ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ဒီ 7th FEB ရောက်တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ဖြစ်တယ် ရယ်လို့တော့ အမှတ်ရနေနိုင်အောင် အတန်းကြီးတဲ့ စီနီယာ နောင်တော်တွေက ခင်းထားတဲ့ လမ်းလေးကို လိုက်နင်းခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီအစဉ်အလာလေးကို နောင် အရွယ်ရောက်ပြီး အတန်းကြီးလာတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ငယ်လေးတွေလည်းပဲ အမှတ်ရစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်း ပါပါတယ်။ ချယ်ရီပင်တွေအစား ယူကလစ်ပင်တွေ နေရာအနှံ့ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ ရှမ်းပြည်ဟာ အေးချမ်းတဲ့ ဥတုအစား ပူလောင်လောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ချယ်ရီနံ့တွေ သင်းနေရမယ့် နေရာမှာ ကန့်နံ့တွေ ထုံလွှမ်းလို့ နေတာမို့ ဒါရှမ်းပြည်လားဆိုတာ မေးယူရလောက်မတတ် လေလွှာတွေကပါ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ သလိုပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရှမ်းပြည်လေးပါပဲ.....။ ကျွန်တော် နေခဲ့တဲ့ ရှမ်းပြည်လေးပါ။
Labels: ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘ၀များ, တစ်နေ့တာအချိန်များ, အမှတ်တရနေ့
896 KB ပမာဏရှိတဲ့ အခမဲ့ Uninstaller software လေးပါ။ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပြီး၊ မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ software တွေကို Uninstaller လုပ်ရာမှာ လွယ်ကူ မြန်ဆန်ပါတယ်။ window's XP မှာပဲ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မလိုလားတဲ့ .temp ဖိုင်တွေကိုလည်း ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ software ရဲ့ .exe ဖိုင်ကို ဒီကနေ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Free software လေးတွေ install လုပ်ရတာ လွယ်ကူတယ် ထင်ရပေမယ့်။ လူတိုင်းအတွက် တကယ်ပဲ အသုံးတည့်ရဲ့လား ဆိုပြီး ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ အရင် Download လုပ်ကြည့်တယ်၊ နောက် Run ပြီး သုံးကြည့်တယ်။ တကယ်ပဲ အကျိုးရှိတယ်ဆိုမှ ပို့စ်အဖြစ် တင်ဖြစ်ပါတယ်။ software ၁၀ ခုလောက် စမ်းကြည့်မှ၊ run ကြည့်မှ တစ်ခုစ နှစ်ခုစ လောက်ပဲ အသုံးတည့်၊ အသုံးဝင် ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စမ်းသပ်ပြီး အသုံးမ၀င်ဘဲ install လုပ်မိတဲ့ software တွေကို ပြန်ဖြုတ်ပစ် ရတာကလည်း ဒုက္ခမသေးပါဘူး။ အချိန်ပေးရတာကို ပြောတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်စက်ထဲက ပိုနေတဲ့ Software တွေကို Uninstaller တွေအများကြီး ရှိတဲ့ အထဲက ဒီ ZSoft Uninstaller ကို အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူ မြန်ဆန် ထိရောက်လှပါတယ်။ လက်တွေ့ သုံးပြီးမှ မျှဝေပေးတာ ဖြစ်လို့ စိတ်ချစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (ကြော်ငြာခရလို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ၀ါသနာလေး တစ်ခုတည်းအတွက် နဲ့ပါ။) အဆင်ပြေ နိုင်ကြပါစေ။
20.35 MB ရှိတဲ့ free mario ဂိမ်းလေးကို window's 98, Me, NT, 2000, XP, 2003 တွေမှာ ကစားနိုင် ပါတယ်။ မရိုးနိုင်တဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။ အပျင်းပြေ ကစားနိုင်အောင် လင့်ခ်လေးကို ဒီကနေ Download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားဂိမ်းတွေကို နှစ်သက်သေးတယ် ဆိုရင် ဂိမ်းအများကြီးကို ဒီကနေ သွားယူ နိုင်ပါသေးတယ်။
Labels: Games, မျှဝေခြင်း, အခမဲ့ Softwares, အင်တာနက်
7.29 MB size ရှိတဲ့ အခမဲ့ PC Maintenance and Protection Software လေးတစ်ခု မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ Windows 2000, XP, 2003 နဲ့ Vista တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ....
Junk Files Clean တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
software ရဲ့ asc-setup.exe ဖိုင်ကိုတော့ ဒီကနေ Download လုပ်ရယူ နိုင်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 1:28 PM
2.6 MB ပမာဏရှိတဲ့ အခမဲ့ Free Screen Capture software လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ Window's Vista, XP နဲ့ 2000 တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ နှိပ်ပြီး သုံးလို့ရတဲ့ Keyboard က Print Screen ခလုတ်ထက်တော့ အများကြီး အသုံးတည့်ပါတယ်။ Software ရဲ့ easycapture_setup.exe ဖိုင်ကို ဒီကနေ Download လုပ်ယူပြီး Run လိုက်ယုံပါပဲ။
18.4 MB ပမာဏ ရှိတဲ့ အခမဲ့ Multi-functional Media Converter လေးတစ်ခုကို မျှဝေ ပေးချင်ပါတယ်။ သီချင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်တွေကို format ပြောင်းချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ ဖိုင် size လျော့ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ပါစေ အသုံးဝင်တဲ့ software လေးပါ။
Movie ဖိုင်တွေကို MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF အဖြစ်
Audio ဖိုင်တွေကို MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV အဖြစ်
Image ဖိုင်တွေကို JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
DVD ရဲ့ .VOB Format တွေကိုလည်းပဲ လိုချင်တဲ့ အပိုင်းလေးပဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် .WMV ဖြစ်ဖြစ် .AVI ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်အကူ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Software ရဲ့ FFSetup170 Zip ဖိုင်ကို ဒီကနေ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာက မရနိုင်ရင် ဒီမှာ ထပ်ပြီး Download လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Posted by Welcome at 7:55 AM
နာမည်ကြီး ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်း Movie Week ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ အကြီးကျယ်ဆုံး ကိုရီးယား အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု ရရှိသွားတဲ့ My Sassy Girl ဇာတ်ကားမှ မင်းသမီး Jeon Ji Hyun - ဂျွန်ဂျီဟွန်
(၀န်ခံချက် ။ ဆားချက်ဖို့၊ ငံပြာရည်ကျိုဖို့ ဒီပို့စ်သေးသေးလေး အတွက်နဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်နေကုန် သွားတယ်။ ဘာပညာမှတော့ မပါပါဘူး။)
Labels: ငံပြာရည်ကျိုခြင်း, မျှဝေခြင်း
အခုမှ ရောက်ဖူးတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က မြန်မာ ကာရာအိုကေ သီချင်းဆိုလို့ ရနိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆို က်လေး တစ်ခု မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ သီဆိုသူ တေးသံရှင် ၁၀၇ ယောက်ရဲ့ တေးသီချင်းများကို ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ထားပေးပါတယ်။ နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းရဲ့ Code ကိုလည်း ရယူအသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ Contests မှာ Register လုပ်ပြီး ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းကိုလည်း တင်နိုင်ပါတယ်။ တင်ပြီးသားသီချင်း တွေကို နားထောင်ပြီးလည်း မှတ်ချက်ပြု နိုင်ပါသေးတယ်။ (ကျွန်တော်တော့ အကြိမ် ၂၀ လောက် Register လုပ်တာ You have entered wrong security code. စာတန်းပဲပေါ်နေလို့ လက်လျော့ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ပဲ ပိန်းတာ နေမှာပါ။) ၀က်ဘ်ဆိုက်ထဲ ၀င်မွှေရင်း နှစ်သက်မိတဲ့ ဘိုဘိုရဲ့ ညှို့မျက်ဝန်းသီချင်း လေးကို ပြန်လည် တင်လိုက်ပါတယ်။ အပျင်းပြေပေါ့။ ကာရာအိုကေ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ဒီကနေ Click လုပ်ပြီး သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ညှို့မျက်ဝန်း / ဘိုဘို
နောက်လှည့်ကြည့်တစ်ချက် ဆိုသာရုံလေး ညှို့မျက်ဝန်းရှင်ရယ်
မင်းပေးသွားတဲ့ ရင်ဝေဒနာလည်း စက္ကန့်ရွှေ့ အမျှပါပဲ
ကလေးငယ်လို လိုလားမှုများစွာနဲ့ရယ် တောင်းခံသူကို
အချစ်တစ်ခြမ်း တစ်ဖဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စေတနာသဒ္ဒါ သလောက်မျှခဲ့ပါ
အချစ်လမ်း တစ်ဝက်ဖြစ်ဖြစ် ကြင်နာနိုင်သလောက် ရွေ့လှမ်းပါ
အချစ်ပန်းတစ်ဝက် ဖြစ်ဖြစ် စာနာနိုင်သလောက် စွန့်ခဲ့ပါ
နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့မနာ နှလုံးသားနဲ့ နာတော်မူပါ
ပြောလှည့်ပါ ဟောလှည့်ပါ အချစ်တရားတစ်ပုဒ် နာလိုသူမှာ
အတွေးများစွာ ပေးထားတာ အရှုံးအမြတ်အတွက် မရေရာသူမှာ
မြေဇာမြက်တို့ရဲ့ သိမ်ငယ်မှုနဲ့ ထပ်တူ
တစ်ပြည်ကွာ အနမ်းတို့ရဲ့ အဝေးခွာခြင်းနဲ့ အတူ
ဒီလူမှာသာ ဆုံးရှုံးနေမှာပဲလေ ဆုံးကာ ရှုံးကာသာ နေမှာပဲလေ
ဆုံး ရှုံး နေမှာပဲလေ အမြဲအစဉ် ရှုံးကာသာ နေမှာပဲလေ အမြဲရှုံး နေမှာပဲလေ အချစ်ရေ ..
အသည်းခွင့်မြားချက် ရင်လယ်ဗဟို၌ စူးစိုက်ခဲ့ပြီကွယ်
အပြုံးဝင့်တစ်ချက်က ရင်ကိုတစ်ပါတည်း သိမ်းပိုက်သွားပြီကွယ်
စိတ်အစဉ်ရယ် တစ်ပါတည်း နဲ့ လိုက်ပါသွားတယ် ညှို့ပိုင်သူရေ
အရှင့်ပခုံးနုထက်မှ အပြာရောင် လွယ်အိတ်ကလေး ဖြစ်ပါရစေ
အရှင့်ဖ၀ါးနုအောက်မှ ကတ္တီပါ ဖိနပ်ကလေး ဖြစ်ပါရစေ
အရှင့်ဦးထိပ်ထက်မှ ငွေရောင် ဆံညှပ်ကလေး ဖြစ်ပါရစေ
ပြောလှည့်ပါ ဟောလှည့်ပါ အချစ်တရား တစ်ပုဒ် နာလိုသူမှာ
အတွေးများစွာ ပေးထားတာ အရှုံးအမြတ်အတွက် မရေရာသူမှာ
တစ်ပြည်ကွာ အနမ်းတို့ရဲ့ အဝေးခွာခြင်းနဲ့အတူ
အရှင်ပိုင်ဆိုင်ရာ အသည်းယဇ် ပလ္လင်တော်ထက်မှာ
အနှေးအမြန် စတေးခံကာ နေမှာပဲလေ
အသည်းယဇ် ပလ္လင်တော်ထက်မှာ ဆုံးကာရှုံးကာသာ
နေမှာပဲလေ ဆုံးရှုံး နေမှာပဲလေ အချစ်ရေ .. ..
Labels: မျှဝေခြင်း, အင်တာနက်, နှစ်သက်မိတဲ့သီချင်းများ
အချိန်နဲ့အမျှ တိုးတက်နေတဲ့ အင်တာနက် IT ခေတ်ကြီးရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ လူငယ်တွေ အင်တာနက် ဆိုတာနဲ့ မပတ်သက်ချင်သည် ဖြစ်စေ၊ ပတ်သက်နေရလို့ ဖြစ်စေ နည်းပညာနဲ့ အင်တာနက်ကို အကျွမ်းမ၀င်သေး သူတွေအတွက် modem ဆိုတာ ဘာလဲ၊ BIOS ဆိုတာ ဘာလဲ၊ CMOS ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာတွေကို ဂဃနဏ သိစေနိုင်မဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးကို မျှဝေပေး ချင်ပါတယ်။ မသိခြင်းတွေဟာ လေ့လာ သင်ယူသူများရဲ့ အားငယ်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ် စေတတ်တဲ့ အတွက် နည်းပညာကို ကြောက်မသွားဖို့နဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ဖြစ်နေစေဖို့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် လေးက အများကြီး ပံ့ပိုးပေး ပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာအကြောင်းပဲ သိချင်သိချင် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လေးမှာ လေ့လာကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။ Active X ကစလို့ WA28 အထိ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းချက်တွေ အပြည့်အစုံနဲ့မို့ အင်တာနက်မှာ ကောင်းစွာ ရှာဖွေစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးကို ဒီကနေ Click လုပ်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 4:32 PM
BETA Version သာရှိသေးတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Online Photo Storage ၀က်ဘ်ဆိုက်လေး မျှဝေပေးချင် ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြ ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင် တွေဖြစ်စေ၊ အပျော်တမ်း ဓာတ်ပုံသမားပဲ ဖြစ်စေ ကောင်းစွာအသုံးပြု နိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် လက်တည့်စမ်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ နှစ်သက်ရာ ဓာတ်ပုံတွေကို စုဆောင်း ထားနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက် Register လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ဒီကနေ Click လုပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။